Shir mise Shirqool Qaran, WQ Abdirazak Askar | Berberanews.com
Shir mise Shirqool Qaran, WQ Abdirazak Askar
November 13, 2013 | Published by: admin
Berberanews-Xaaladaha iyo nolosha bulshada Somaliland ee wakhtigan waa mid u socta si caadi ah , xukuumadduna ay wado darqiiq kasta oo ay kor ugu qaadayso hayaanka horumarka dalka. , haddii ay bulshada uga baahato, inay ogaato halka ay wax marayaan waxay u heli karaan si fudud. Sida barnaamijyada su’aalaha ay shacabku ku waydiiyaan masuuliyiinta ay khusayso ee fool ka fool ka ah..
Xaalad kasta oo lagu dhaqaaqyo waxay u baahan tahay in marka hore la isla garto in baahi loo qabo, ka dibna miisaan sax ah la saaro waxtarkeeda iyo waxyeeladeeda, arrimahaasi ka dib ayaa lagu dhaqaqi karaa. Waxaan marka hore hawshooda iyo taxliinlteeda iska leh cidda markaa hawsha hogaanka u ah, maha kuwo ummada ay ku aamini wayday hogaaminta qaranka..
Xisbiyada mucaaridku markay iyagu keeni waayeen higsi iyo hami ayaa la adeegsanaya waxa loo soo waariday fikir ka yimi dhinaca cadowga oo ah shir qaran oo ay ku hoos jirto Shirqool Qaran, kaasi oo ay ugu dan leeyihiin inay ku khalkhliayaan dawladnimada iyo horumarka aragagax ku ah ee xukuumaddu fulinayso maalin kasta, kaasi oo ay u arkeen inuu soo jiidan doono ictiraafka caalamka.
Waxa maanta iska cad rag kamid ah kuwa ku baaqaya shirqoolka qaranka inay hore si dhuumasho ah ( dhuumasho dhabarku muuqdo) ugu duseen madaxda Walaweynta, wakhtigaasi waa markii loo soo dhiibay shirqoolka ay hadda shaaca ka qaadeen.
Mucaaradku maleh yool dhab ah oo ay ku socdaan, fikrado lagu soo waariday oo cadawgu keenaya ayaa la yuururaan…
Nin faylasfuuf ayaa soo maray nin ka ambaday jidkii oo meel cidla ah taagan, ninkii wuxu weydiiyay faylasuufkii inuu wadada ka ambaday oo uu u bahan yahay in loo tilmaamo,
Faylsafuukii wuxu waydiiyay .. Halkeed rabtay oo aad u socotay ?
Ninkii ambadka ahaa wuxu ku jawabay Meelna uman socon ! Faylasuufkiina wuxu u celiyay haddaanad meelna u socon dariiqaad doonto raaca, ama halkanba iska jog..!
Mucaaridku mar hadaanu ujeedoba lahayn , kolba cidda wax u sheegta ayuu raacayaa… Fikradda shirqoolkan qarankuna mabay ahayn wax iska soo fulay waa sidaynu sare kusoo sheegnay.
“Cadowga weyni wuxu adeegsadaa maangaabka guriga kula joogo”
Mucaaridka Somaliland waxay isu xilsaareen wakiil cadaw inay noqdaan, laakiin bulshada Somaliand way dhaaftay heerkii lagu khaldi jiray dibindaabyo in looga dhigo dheef.
Xukuumadduna waa nidaam ummadu dooratay oo waxtarkeeda loo siman yahay, wanaag bulsho oo ku jiraana ma jiro mucaarideeda, tan maanta ay mucaaridku wadaan wayba dhaaftay dawlad oo waxay maraysaa dal iyo qaran, waayo shirweyne qaran oo aan wakhgigiisii la joogin waa arin aw wax ku hoos laaban yahay… waa mid dib la inoogu celinayo, waa burburka dhamaan hay’adhihii iyo nidaamkii soo dhismayay 22-ka sano.
Sharciga iyo nidaamka la dejistay oo laga horyimaado waxa kelifaa waa iyadoo qofku ka baqayo mustaqabalka, ama ama quus ah… Mucaaridku waxa u tafaxayteen dhaqan aan caado u ahaan jirin oo ah in qaranimada Somaliand la farfareeyo.. markii ay cabsi weyni ka gashay hamiga guusha hogaaminta dalka.
Xikmad ayaa tidhaa: “ Doorashdu way ka xanuun badan tahay rasaasta”
Xaalka xukuumadduna inay hawsheeda harumarka wadato wixii sharci deelqaaf ku ahna ay u tudhin.
Mucaaridku waxay marayaan heerkii ay gaadheen Hitlter iyo stalein oo lahaa odhaahyo caan noqday
“ Markaad quusto wax kasta same, baabii”
Gabagabadii, mucaaridaw waxaad noqoteen tuke baal cad, Ujeedadiinana bulshadu way ogtahay, ma tihiin cirka soo dhac ee waxaad ka kooban tihiin kuwii shalay lagu aamini waayey qaranka iyo qaar kale oo ku fashilmay xilal hore loogu soo magacaabay.xukuumadana waxaanu kula talinaynaa inay ka hortagto shirqoolkaa ummada loo soo maleegay.